पंचायत फर्किएकै हो त ?
डा. गाेपाल ठाकुर शनिबार, पुस २८, २०७५ मा प्रकाशित
अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको छ । यो संविधान पनि स्वयंमा सर्वस्वीकार्य नभए पनि संविधानभन्दा माथि कोही छैनन् । बहुदलीयता र बहुलता यसका प्राण हुन् र जहाँ बहुदलीयता र बहुलता छन् त्यहाँ जनताको कुनै पनि तह र तप्काले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भई कुनै पनि विषयमा आफ्नो अभिमत राख्‍ने नैसर्गिक अधिकार राख्दछ । त्यसो गरिरहँदा संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि यदि कसैले हमला गर्न खोज्छ भने सरकारसँग पनि तह लगाउन अधिनायकत्व यस संविधानले सुरक्षित राखेको छ । तर हाम्रो देश मात्रै अपवाद भएको देखिएको छ । संघीयतामाथि हमला गर्नेहरूलाई यो सरकारले पालित पोषित गरिराखेको छ भने गणतन्त्रमाथि हमला गर्नेहरूलाई प्राज्ञिक सम्मान प्रदान गर्दै आफैँलेसमेत हमला गर्ने दुस्साहस गरेको छ । भन्नु पर्दैन यदि संघीयता र गणतन्त्र संकटमा छन् भने लोकतन्त्र कसरी जीवित रहन सक्छ र ?
निश्चित रूपमा संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र तीनोटैको घाँटी निमोठेका छन् वर्तमान सरकार प्रमुख र गणराज्य प्रमुखले हिजो आ-आफ्ना कालाधन्धाको सार्वजनिकीकरण गरेर । हिजो पृथ्वीनारायणको जन्मदिनमा उनको शालिकमा उधो मुन्टो लाएर राष्ट्रपतिले सलामी खानु र प्रधानमन्त्री स्वयंले यसै सन्दर्भमा उनलाई आधुनिक नेपालको निर्माता बताउँदै सम्मान गर्नु गणतन्त्र वरोधी संवैधानिक अपराध हुन् । निजहरूका यस्ता हरकतले राजतन्त्रवादीहरू जो जन्मजात संघीयता विरोधी पनि हुन् निकै हौसिएका छन् । पंचायतकालीन पृथ्वी जयन्ती समारोह पुनर्स्थापित भएको अभिव्यक्ति पनि तिनीहरूका तर्फबाट आएकै छन् ।
लोकतन्त्रको पनि खिल्ली उडाएको शुरूवात हिजै भएको अनुभूत गरियो । तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदले हिजोको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस कि प्रतिरोध दिवस के हो, यस विषयमा संघीय राजधानीको थापाथली क्याम्पसको सभाकक्ष (ग्यालरी) मा छलफलको कार्यक्रम राखेको थियो । क्याम्पस प्रशासनसँग त्यसको लागि अनुमति प्राप्त गरी उक्त कार्यक्रम राखिएको थियो । तर निर्धारित समय अपराह्न साढे दुई बजे आयोजक र सहभागीहरू पुग्दा सभाकक्षमा ताल्चा झुण्डिएको पाइयो । क्याम्पस प्रशासनका अनुसार प्रहरी प्रशासनको धमकीपूर्ण आदेशमा ताल्चा लाइएको थियो । पत्रकारहरूले प्रहरीलाई सोध्दा थाहा नभएको उत्तर पाइयो रे ! राज्य प्रायोजित यस अपराधलाई संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र तीनोटैमाथिको सिङ्गो हमला बाहेक अरूथोक बुझ्नै सकिन्न ।
तमरापले उक्त कार्यक्रम क्याम्पसको प्रांगणमै सम्पन्न गर्नु पर्‍यो । स्वाभाविक छ सकारात्मक अभिव्यक्तिको मानसिकता पनि यस्तो परिस्थितिमा नकारात्मक नै हुन्छ र भयो पनि त्यही । किनभने दमनले प्रतिरोध बढाउँछ भन्ने तथ्य न्यूटनको तेस्रो गतिनियमसंगत नै हो । तर यत्रो दुई-तिहाईको सरकार जहाँ झापा आन्दोलनको नायकत्वमा भागिदारी जनाउने राजनेता प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष नै हुन् तथा दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली व्यक्तित्व गृहमन्त्री, त्यहाँ साढे दुई शताब्दी पहिले नै देहत्याग गरेका पृथ्वीनारायणका सकारात्मक र नकारात्मक आयामहरूको चर्चा-परिचर्चाबाट के-कस्ता त्रासहरू किन जन्मिए त ?
किनभने पृथ्वीनारायण विजेता युद्ध अपराधी नै थिए । यस्ता युद्ध अपराधीलाई त तिनको चिहान खनी सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा छ । तर विडम्बना छ, कम्युनिष्ट र संघीय समाजवादीसमेत सम्मिलित यो सरकारले पृथ्वीनारायणमाथि बहस हुन पनि दिँदैन । आखिर किन यस्तो हुन गयो त ?
किनभने कथित नेपाली राष्ट्रियता ‘गोर्खा साम्राज्य’ को रूपमा पृथ्वीनारायणद्वारा स्थापित छ जसलाई अपवाद बाहेक कथित लोकतान्त्रिक वा कथित कम्युनिष्ट नेतृत्व पनि पितामह भिष्मजस्तै तिनको जातीय उत्तराधिकारीहरूको हातमा सत्ता नरहे सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्दैनन् । त्यसैले पृथ्वीनारायणको शालिक रक्षाको लागि भए पनि यिनीहरूको बीचमा कुनै पनि दार्शनिक वा राजनीतिक मूल्यमान्यताले फाटो ल्याउन सक्तैन । हो, अहिलेसम्मको लडाई तिनै सत्तामा आफ्नो समकक्षता सिद्ध गर्नको लागि यिनीहरूले लडेका रहेछन् भन्ने कुरा अन्य राष्ट्रियताहरूले बुझ्न जति ढिलो गर्छन् तिनीहरूको टाउकोमा यो गोर्खे लौरो बज्रिरहनेछ ।
अब थोरै कुरा पृथ्वीनारायण र नेपालको बारेमा पनि गरौँ ।
पृथ्वीनारायणलाई अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी विम्बस्थापन गरेका छन् तिनका अनुयायीहरूले । तर यो पूर्णतः गलत छ । किनभने पृथ्वीनारायणलाई तिनको गोर्खा राज्यविस्तारमा हातहतियारको सहयोग मात्रै अंग्रेजहरूले गरेका थिएनन् बरू तिनका विरोधी कतिपय राजा-रजौटाहरूलाई तिनी र तिनका उत्तराधिकारीहरूसमक्ष सुपूर्दगी पनि गरेका थिए । जहाँसम्म केही भाटहरूले गोर्खाली कहिल्यै हारेनन् भन्दछन्, भक्ति थापालगायतका भगौडाहरू पंजाबी सेनामा गुलामी गर्दै मारिएको तथ्य अब कहाँसम्म लुकाउन सक्छन् ? साथै सुगौली सन्धिले नै फर्स्यौट गरिसकेको छ, दुई लाख रूपैया वर्षेनीको लागि मधेशको सौदाबाजी यी दुबै शासकहरूले गरेर अहिलेको सीमा कोरेका छन् ।
हो, पृथ्वीनारायण गोर्खा राष्ट्रनिर्माता हुन् । तिनलाई गोर्खा महाराज भनेर कानूनी दस्तावेजहरूले पनि सम्मान गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म गोर्खालीहरूलाई नेपालीकरण गरिएको सन्दर्भ छ, त्यो त झन लाजमर्दो छ । भारतका सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधानले जम्माजम्मी आजभन्दा ८५ वर्ष पहिले यिनीहरूका लागि कथित ‘नेपाली’ पहिचान जुराइदिएका हुन् । त्यसैले यो सिङ्गै ‘नेपाली’ पहिचान नै विदेशी मस्तिष्कको उपज हो । यसकारण नेपाली भएर सोच्ने आग्रह जुन यी गोर्खे-आर्यहरूले गोर्खालीतरहरूलाई गर्छन्, आफैँमा नेपालविरोधी मानसिकता हो । त्यसभन्दा त मधेशी, थारू, तमु, मगर, नेवार, लिम्बू, किराँत भएर सोच्नु कति प्रगतिशील छ कति ! हो, यी विभिन्न राष्ट्रीयताहरू एकजुट भएर एक-अर्काको सह-अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने समृद्ध एकत्वमा कुनै साझा पहिचान स्थापित हुने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न । तर यी आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई धुलोपिठो पार्दै विदेशीहरूले भिडाइदिएको फोस्रो आडम्बरको रूपमा यो विलयकारी ‘नेपाली’ पहिचानको नाममा गोर्खे लौरो यदि कसैले बजार्छ भने त्यसको त प्रतिरोधमा मात्रै उत्तर आउने निश्चित छ ।
त्यसैले राजासहितको पंचायत त राजा लिएरै चिहानमा
पुग्यो भने गणतान्त्रिक आवरणमा पंचायती तानाशाही कसरी पो स्वीकार्य हुन्छ ?
ॐकारेश्वर बस्ती वाणस्थली, चन्द्रागिरि-७, काठमाडौं ।